Ingaphambili elibandayo. Yini, yakhiwa kanjani futhi iyini imiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo sezulu sithonywa ukuguquguquka okuningi kwesimo sezulu. Amanani alezi zinto eziguqukayo yilawo abangela ukungazinzi komkhathi, ukuzinza, ukuvunguza komoya, imvula, njll. Cishe uzwe umuntu wesimo sezulu ekhuluma kaningi ethi ukubanda ngaphambili. Yini le nto ebandayo?
Kule ndatshana sizochaza ukuthi yikuphi ukubanda okubandayo, ukuthi kwakhiwa kanjani nokuthi kunamiphi imiphumela esimweni sezulu.
1 Yini ukubanda okubandayo
2 Kwakhiwa kanjani
4 Uma usudlulile ngaphambili
Yini ukubanda okubandayo
Uma sikhuluma ngengaphambili, sikhuluma ngentambo yokuxhuma phakathi kwenqwaba yomoya enezici ezihlukile. Izindimbane zomoya ziyajikeleza futhi zinezici ezihlukile ngokuya ngokuguquguquka kwesimo sezulu esishilo ngenhla. Enye yezinto ebhekwe kakhulu kumanani womkhathi ukwazi izici zangaphambili ukushisa.
Ngalesi simo, ikakhulukazi, singalwazi uhlobo lwangaphambili oluza endaweni. Uma kungaphambili elibandayo, ngaphambili elishisayo, njll. Okunye kokuguquguquka komkhathi lapho izingqimba zincike khona yi-lumswakama, isivinini somoya nesiqondiso nengcindezi yasemkhathini.
Ingaphambili elibandayo yilona elikhombisa umngcele ophakathi isisindo somoya esibandayo esihambayo, uma kuqhathaniswa nomoya oshisayo. Imvamisa, kulolu hlobo lwezingqimba kuyisisindo esibandayo esisusa umoya oshisayo. Kubalulekile ukwazi ukuthi izindimbane zomoya azihlangani ngaphambili. Ngaphandle kwalokho, akukho ngaphambili okunjalo okuzokwakhiwa. Kumele sicabangele umehluko phakathi kwabantu lapho sikhuluma ngobuningi bomoya.
Khumbula ukuthi i umoya oshisayo awuminyene kakhulu kunomoya obandayo, ngakho-ke uyohlala uthambekele ekukhuphukeni. Lapho kuhlangana umoya obandayo nenqwaba yomoya oshisayo, yibanda lomoya elibandayo elihamba ngokushesha ebusweni ngoba lijiyile. Lokhu kudala ukuthi umoya oshisayo uhambe uphakeme ngoba awuminyene kakhulu. Uma sinendawo ebandayo, ngokuvamile, amazinga okushisa azokwehla ngoba umoya obanda kakhulu uphezulu.
Isithombe - Wikimedia / HERMENEGILDO SANTISTEBAN
Sizohlaziya igxathu negxathu ukuthi lolu hlobo lwangaphambili lwakhiwa kanjani. Lapho sinomoya oswakeme futhi ongazinzile, lapho uvame ukukhuphuka ngenxa yobuningi obuphansi, uzongena ekwehleni kwamazinga okushisa ajwayelekile troposphere. Njengoba sikhulisa ukuphakama, izinga lokushisa liyancipha ku-gradient eshisayo. Lokhu kuzokwenza ukuthi umoya oshisayo ujiye ungene emafwini.
Ngokuya ngezimo zemvelo nenani lomoya oshisayo ojiyisayo, kwehlukile izinhlobo zamafu. Uma umoya obandayo uthatha indawo enkulu yomoya ofudumele ngezinga eliphakeme lokukhuphuka, tSizogcina ngokuningi kwalo moya ozobe usufingqa phezulu. Lokhu kuzodala ukuvela mpo kwamafu wohlobo lwe-cumulonimbus.
Lolu hlobo lwamafu lubangela isiyaluyalu esikhulu somoya esibangela izimvula ezinkulu nezishubile. Phakathi kwezimo esingaba nazo sinesichotho, izivunguvungu zikagesi, imimoya enamandla kakhulu, izivunguvungu zeqhwa, ukuvukela okungalungile, imimoya enamandla kanye neziphepho uma zingakha.
Kumele futhi kuthiwe akuyona yonke imikhakha ebandayo enodlame olunje. Izinga lodlame noma ubungozi bengaphambili lomfula kuya ngomswakama wesisindo somoya oshisayo, ngaphezu kwenani lomoya oshisayo ojiyile. Kungenzeka ukuthi ukukhuphuka komoya ofudumele akumile mpo njengokwakha amafu akhula amile, kepha amanye ama-nimbostratus azokwakheka ngemvula elinganiselayo. Elinye lamagugu anquma kakhulu isivinini somoya. Ngokuya ngaleli nani, ubukhulu bomoya obandayo buzohamba ngejubane eliphakeme okuzothi, bese, ludlulisa umoya ofudumele ophakeme. Uma umoya unomswakama futhi ukunyakaza kume mpo ngokuphelele, sizoba nesimo sezulu esiyinhlekelele.
Izimpi ezibandayo zivame ukuhamba ngokushesha, ngejubane eliphakathi kuka-40 no-60 km / h. Lokhu kwenza isikhathi esihlala phakathi kwezinsuku ezintathu nezingu-3. Ubude bendawo yonke le ndawo evame ukuthinteka imvamisa buphakathi kwama-500 nama-5.000 km. Ngokuqondene nobubanzi, ingaba phakathi kuka-5 km no-50 km.
Lapho ngaphambili ebandayo kuthiwa isondela, emoyeni oshisayo ingcindezi yasemkhathini izinzile. Kungenzeka futhi ukuthi kwehle kancane yilokho okwenza umoya uthambekele ekuthutheleleni endaweni enengcindezi encane yomkhathi. Into yokuqala esivame ukuyibuka ukukhomba ingaphambili elibandayo ukwakheka kwamafu amhlophe aphakeme kakhulu. Lawa mafu angawahlobo lwe-cirrostratus. Kamuva, szakha amafu aphakathi nendawo njenge-Altocumulus noma i-Altostratus. Ngalesi sikhathi, imimoya ilula kodwa ayinayo indlela ebekiwe.
Njengoba ingaphambili elibandayo lisondela, amafu aya ngokuya eba mkhulu futhi nemvula iya ngokuya iba namandla. Ngaphezu kwakho konke, okukhombisa kakhulu ukusondela kwengaphambili elibandayo ukwanda kosayizi wamaconsi amanzi. Umoya uqala ukuphefumula futhi awunaso isiqondiso esizinzile.
Lapho sesivele sihlangana nengaphambili elibandayo, sizobona ukwehla kwamazinga okushisa, aqinile izihlambi okuvame ukuhambisana nesiphepho, umoya onamandla amakhulu, ukungabonakali kahle nolwandle olunolaka.
Uma usudlulile ngaphambili
Lapho ingaphambili elibandayo selidlulile, sizokwazi ukubona ukucishwa okukhulu enyakatho-ntshonalanga futhi kuzothuthukisa ukubonakala okuningi kakhulu. Izinga lokushisa lizokwehla ngandlela thile futhi kuzoba nomswakama omncane. Ingcindezi yasemkhathini inyuka ngokushesha, ngoba umoya ongaphezulu kwethu uyabanda futhi ngenxa yalokho usinda.
Ngokuqondene namafu, amanye amafu we-cumulus aqhelile angavela kepha ngaphandle kwemvula ethe xaxa. Enyakatho Nenkabazwe, iqhaza lomoya lizoya kwesokudla naseningizimu yezwe kwesobunxele ngenxa yomphumela we-coriolis.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nengaphambili elibandayo nakho konke okuphathelene nalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ingaphambili elibandayo
U-ARNOLD GOMEZ kusho
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi nginombuzo ngihlala eTegucigalpa, eHonduras, kodwa lapha uma kuthiwa kunendawo ebandayo, amafu abomvu ngombala futhi alina nhlobo.
Phendula u-ARNOLD GÓMEZ
Incazelo enhle kakhulu